२०७४ कार्तिक ६, सोमवार
नेपाल संगीततथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल सङ्गीततथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथमकुलपतिएवम् नेपालको राष्ट्रगानका सङ्गीतकार सङ्गीतज्ञ स्व. अम्बर गुरुङको स्मरण गरेको छ ।
गुरुङको प्रथमवार्षिक पुण्य तिथिको अबसरमा बिहिबार प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजितस्मृति सभाकार्यक्रमको उनको योगदानको स्मरण गरिएको हो ।
यस प्रतिष्ठानको सदस्य सचिब गणेश रसिकले कार्यक्रममा स्वागतगर्दै भारतमाजन्मेर पनि स्रस्टा अम्बर गुरुङले नेपालआई नेपाली संगीतमाअतुलनीय योगदान पु¥याउनु भएको भनाई राख्नु भयो ।
वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाले सो कार्यक्रममाअम्बर गुरुङको सम्झनागर्दै उहाँले बनाईसकेको धुनमाआफुले गीत लेखेको जानकारी गराउनु भयो । नेपालमाअम्बर गुरुङले भित्राउनु भएको क्वार्ज संगीतको महत्वबारे थापाले प्रकाशपार्नु भयो ।
प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रचण्ड मल्लले कार्यक्रममाबोल्दै गुरुङ असाध्यै मिलनसार भएको भन्दै संगै कामगर्दाको क्षणहरुको सम्झनागर्नुभयो ।
कार्यक्रममापूर्व प्राज्ञ सभा सदस्य यज्ञराजउपाध्ययले हृदयदेखि श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै गुरुङ गीतसंगीतकामर्मज्ञहुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो । साथै नेपालको माटो सुहाउने सृजनाहामीमाझ छोडेर हामीलाई पनि यस्तै सृजन ागर्न प्रेरित गर्नुभएको कुरा पनिव्यक्तगर्नु भयो ।
म्यूजिक नेपालकाप्रबन्धनिर्देशक सन्तोष शर्माले गुरुङ सांगीतिकआकाशका सगरमाथाभएको कुरा व्यक्तगर्नु भयो । यस्तै संगीतकार संघका महासचिव राम्रा साहित्यकार, संगीतकार, रचनाकार कहिले नमर्ने कुरा व्यक्तगर्नु भयो ।
साथै कार्यक्रममा गुरुङका सुपुत्रकिशोर गुरुङले उहाँको सालिन र भद्र स्वभावको व्यक्तित्व रहेको कुराको सम्झनागर्नु भयो । राष्ट्रगानमा सँगीतको जिम्मालिएर बुबाले गरेको संगीतमन्त्रालयमाबुझाउँनजाँदाअरुले पनिबाहिरी व्यक्तिसँग संगीत गराएरसुनाएको स्मरण गरे ।
कार्यक्रमको समापनको क्रममाबोल्दै प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तश्रेष्ठले यो स्मृति सभा एउटा परम्पराको थालनीभएको र आगामीवर्षदेखि बृहतरुपमा यस्ता कार्यक्रमको आयोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । साथै उहाँको नाममा स्मृतिग्रन्थप्रकाशनगर्न लागिएको र हुलाक टिकट प्रकाशनकालागि सम्बन्धितमन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
स्व. गुरुङको सांगीतिक योगदानको सम्झनामाआयोजनागरिएको सो कार्यक्रममावरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापा, पूर्व उपकुलपति प्रचण्ड मल्ल, प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गण्ेश रसिक, संगीतकार संघका महासचिव महेश खड्का, म्युजिक नेपालकाप्रबन्धनिर्देशक सन्तोष शर्मा तथा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तश्रेष्ठले बोल्दै्र आफ्नो श्रद्धान्जली अर्पण गर्नु भयो ।
नेपाल संगीततथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिभक्तश्रेष्ठ (सरुभक्त)को सभापतित्वमाआयोजनाभएको कार्यक्रममा संगीततथा नाट्य क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।